Ingonyama yakwaJuda iitattoos, ezimele amaJuda kunye namaKrestu | Ukuzoba
Nat Cherry | | IiTattoos zezilwanyana
Los iiTattoo zengonyama YakwaYuda kubhekiswa kwesi silwanyana sithandekayo, uphawu olubonakala kwinkcubeko yamaJuda kunye neyamaKristu.
Ukuba ufuna ukwazi ifayile ye- iiTattoo zengonyama yakwaYuda kwaye ufunde ukuba zithetha ntoni, ungaqhubeka nokufunda eli nqaku, kuba siza kubona ngokufutshane ukukhankanywa kwalo kwiinkcubeko ezimbini. Unokumangaliswa kukukhankanywa IziKronike zaseNarnia.
1 Ingonyama yakwaYuda kwinkcubeko yamaJuda neyamaKristu
2 Yahluke njani le tattoo kwii tattoos zeengonyama?
Ingonyama yakwaYuda kwinkcubeko yamaJuda neyamaKristu
Ukuba uza kukhetha ii-tattoo zengonyama yakwaJuda, kungcono ukuba ucace malunga nokuba olu phawu luvela phi. Imbekiselo yokuqala esinayo ikwiGenesis, (kokubini kwiTorah naseBhayibhileni) apho uYakobi asikelela unyana wakhe uJuda kwaye amchaze “njengengonyama entsha” (Genesis, 49: 9). Ukususela ngalo mzuzu ukuya phambili, inkcubeko yamaJuda yayiguqula njengophawu lwayo.
Kwakhona, Okunye ukukhankanywa kwenziwa ngengonyama kwiSityhilelo, ke ikwaluphawu lobuKristu olukholelwa ukuba ingonyama inxulumene nokubuya kwesibini kukaYesu.
Kwaye malunga IziKronike zaseNarnia? Isalathiso ayikho enye into ngaphandle kokuba umbhali, u-CS Lewis, wasebenzisa ifom yengonyama kumlingiswa ka-Aslan, okholelwa ukuba ungummeli kaYesu Krestu.
Yahluke njani le tattoo kwii tattoos zeengonyama?
Ukwahlula phakathi kweengonyama zakwaJuda ii-tattoos zeengonyama ngaphandle kwento enye, unokukhetha ukubeka ireferensi kwivesi yeGenesis apho ingonyama ivela khona okokuqala.
nayo, Unokukhetha ukubeka olunye uphawu oluqhelekileyo lolu hlobo lwenkcubeko, umzekelo, ihobe lokwazisa okanye imvana kaThixo (ukuqhubeka nomxholo wezilwanyana).
Iitoni zeNgonyama yakwaJuda lukhetho olufanelekileyo kumakholwa, kunye nokuba sisilwanyana esihle nesinamandla esijongeka sikhulu kumvambo. Khawusixelele, ubuyazi le ngonyama? Ngaba unayo itattoo enje? Khumbula ukuba ungasixelela into oyifunayo ngokusishiya nezimvo!
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuzoba » Iindidi zeetattoos » IiTattoos zezilwanyana » Ingonyama yakwaJuda iitattoos, ezimele amaJuda kunye namaKristu
Ukuqokelelwa kwee-sloth bear tattoos kunye nentsingiselo yazo zichaziwe